Akachemerera achibva aridza mhere apa ichinyura mukati make! | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Akachemerera achibva aridza mhere apa ichinyura mukati make!
Ndine 35 years and ndinogara ndega full house, ndine transport business yangu saka ndinoshanda ma long hours and only get to relax on Sunday. Zuva iri ndinofarira kufamba hangu along the beach saka ndine a friend of a friend anopota achiuya once or twice paweek kuzoita clean the house then gardner anouyawo once pa week.
I was shocked cleaner wangu achindiudza kuti avakubva kuCape Town moving ku Johannesburg which meant kuti ndaifanirwa kutsvaga mumwe munhu anopota achiuya kuzocleaner mumba so ndakaita plan yekutsvaga munhu anogara neni so that ndizowanawo chikafu chakabikwa after basa.Ndaitaura nemumwe musikana ainge ane 18 years aigara kuHarare saka aiti would I consider giving her the job semunhu agara aida kuuya kuCape Town but ainge asingade kuuya kuzonetsa hama dzake dzainge dzakugara muno muSouth Africa.
Well to cut a long story short ndakamupa basa ndokubva awuya two months ago, ndakamutora kuAirport ndokubva tayenda kumba ndokubva ndamuratidza room yake yaanenge achigara yainge iri big bedroom ine en-suite bath and shower and takabvumirana kuti supper tinodya tese mukitchen.
Isabel ainge ane a model body muviri uya uripakati nepakati ndiwo wandaifarira pamukadzi, asina kufutisa. Mwedzi wekutanga wakapfuura and taigarisana zvakanaka as she settled in and mumwe musi kwakati kwatonhora zvikanzi ndokumbirawo kukwidza heater ndikati kwidza hako but kana uchitonhorwa unofanirwa kundiudza ndikudziise, takaseka tichibuda mukitchen. Ndakati ndapedza basa mu study room ndokubva ndawona light muroom mangu but I don’t remember ndichisiya light rakadaro.
Ndakati ndichipinda mubedroom mangu ndokuwona Isabel akarara pamubhedha wangu zvikanzi I hope wanga uchirevesa pawati unogona kundidziisa. Ndakavhunduka asi ndakangovhara door ndokubva ndayenda paside pebed ndokubva ndangobvisa hembe dzese ndikanzwa munhu akuti aaahhhhhh apa aishamisika awona 12 inch mboro yangu apa yakafuta. Isabel akabva aaah nhai Leo handisati ndambowona mboro yakakura kudaro iri normal here iyi, inini ndikabva ndati hausi kungoiwona chete but uchainzwa ichipinda nekubuda mubeche rako.
Ndakavhura the sheets ndikasangana na Isabel ari musvo asina kana chinhu asi muviri wake wainge wakanaka zvekuti ndaitofunga kuti ndichatunda ndisati ndaita anything, ndakabatwa mboro ndikanzwa ichibonyorwa slowly slowly apa ndakabva ndavhara maziso ndichiteerera kutambiswa kwaiyitwa mboro yangu ndikanzwa huronyo huchiwungana apa ndichichemerera zvishoma nezvishoma.
Ndakatanga kumukisa ndichirumirira minyatso ndikanzwa mwana akuchemerera, ndakamusiya mawoko ndikatanga kumukisa padumbu ndichidzika pasi achibva avhura makumbo ndokubva ndatanga kunanzva ma lips ebeche rake apa ndakunzwa kamunhuwi kejuice dzebeche. Pandainanzva beche rake akabva azvipushira pandiri face yangu ndokubva yaita kuzara pabeche, ndainzwa kudziya kwebeche rake kuchiwedzera apa ainge akufemera pamusoro ndokuramba ndichinanzva malips ebeche rake. Ndakaramba ndichimukoira nerurimi ndichipushira mukati ndichinzwa juice dzichiyerera apa achibva atunda a bit.
Ipapo rurimi rwangu rwainge rwakupinda rwuchibuda mukati mebeche rainge rakatota apa Isabel achingozvongonyoka nekushaya pekubata achinakirwa hake nekudyiwa beche, ndokubva aridza mhere apa achitunda zvekuti beche rakaita kunge radirwa mvura mukati richiyerera, Isabel akabva arara asi inini ndainge ndisati ndapedza kwaiva kutanga uko.
Ndakatora zvigunwe zvangu ndokubva zvaita kutsvedzerera zvichipinda mukati mebeche rake Isabel achibva ayita kufemera pamusoro kuita kunge munhu ari kutura mafemo. Chigunwe changu chakawana kag-spot ndokubva ndatanga kukakwizirira ndikanzwa mwana akudedera apa achisunga makumbo ndokubva atunda futi kechi 3 or 4 inini ndichitambisa kag-spot chete. Ndakanzwa munhu akuti oooh yesssss apo inini ndichiwedzera kutambisa kabhinzi kake.
Ndakatora zvigunwe zvangu futi ndokubva ndaisa mubeche rake rainge richiyerera nejuice, ndikanzwa achisunga mhasuru dzebeche zvekuti zvigunwe zvairamba kufamba kana kuita move ndikabva ndaziva kuti nguva yakwana. Ndakatanga kukisa muviri wake ndikanzwa munhu akudeedzera achiti ndisvire kani please please chidisvira kani. Ndakanzwa munhu abata mboro yangu achiinangisa pamuromo webeche, akachemerera achibva aridza mhere apa zimboro rangu richinyura mubeche rake richiita kutsemurira zvikabva zvanzi oooh yesssss svira kani apa aichemerera pese pandainyudza zvishoma nezvishoma apa kutota kwebeche rake kwaiyita kuti mboro itsvedzerere ichinyura mukati.
Ndakada kuburitsa mboro zvishoma ndikanza Isabel akuti oooohhhh yeeesssssssssssss ramba uchisvira kani, zvirisa harder kani. Ndaikoira ndichitambisa minyatso yake ndakamuti fongora ndokubva magaro ase nebeche zvauya kumashure so inini ndokutanga kukoira akafongora kudaro apa achichemerera achingoti aaaaahhhh aaaahhh maimwe kani, ndaidzvura beche ipapo masasi zvekuti akashaya pekubata nekunakirwa. Ndakaramba ndichikoira apa ndichirova rova magaro ake iye achishevedzera harder harder harder kani, apo ndichiita kusvira zvisingaite. Isabel akatanga kuputika mukati mebeche, handina kumira ndokubva ndatanga kunanzvirira juice dzebeche rake kuita kunge munhu arikudya ice cream. Ndakaramba ndichinanzva beche rake iye ndokubva adzikira ndokubata mboro ndokutanga kuinanzva kubvisa huronyo hwese hwainge hwabuda.
Previous articleNdakamupidigura and grabbed magaro ake ndokupomba kusvikira ndatundira mukati!
Next articleTete: Zvinotyisa here kutanga kuisana nemukomana?